Good Bye Toxin
စိတ်ပင်ပမ်းမှုတွေရှိလာတဲ့အခါ LUXURI နဲ့ အနားယူပါ..
နေ့စဉ်ဘဝ မှု စိတ်ပင်ပမ်းစရာ စိုးရိမ်ပူပန်စရာတွေကြောင့် အရင်လို ရွှင်ရွှင်လန်းလန်းမရှိတော့တဲ့အခါ Self-care ဖို့အတွက် သဘာဝ ကျကျ Essential oils တွေကို Diffuse လုပ်ပြီး ကောင်းမွန်စွာ အနားယူနိုင်ဖို့ Made In Myanmar Product တခုအဖြစ် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားပါတယ်…
Ko Ko's Love
🔬Essential oil လေးတွေကို Burmese burner လေးနဲ့ diffuse လုပ်လိုက်တဲ့အခါ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်တယ် ဆိုတာလေးကို လည်းရှင်းပြပေးပါမယ်
🪔Burner လေးထဲကို ရေရယ် ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ essential oil လေးတွေရယ်ရောပြီး အပူပေးလိုက်တဲ့ အခါ ရေငွေ့ပြန်လာပါတယ်၊ အဲ့လို evaporate ဖြစ်သွားတဲ့ အခါ လေထဲမှာ essential oil molecules လေးတွေ ပြန့်နှံလာပြီး အဲ့ လေကို inhale လုပ်တဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက nerves ကြောလေးတွေ/ brain waves တွေ hormones တွေကို အလုပ်လုပ်စေပြီးတော့
✅ Stress Relief ဖြစ်သွားတာ
✅ အိပ်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေတာ
အစရှိသဖြင့် အာရုံကြောတွေ hormones တွေကို နှိုးဆော်စေပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကုသတဲ့ နည်းလမ်းကို aromatherapy လို့ခေါ်တွင်ကြတာပါ။ မြန်မာလို ဘာသာပြန်ရရင် မွှေးရနံ့ဖြင့် ကုစားခြင်းပေါ့။
🔬Essential oil လေးတွေကို Burmese burner လေးနဲ့ diffuse လုပ်လိုက်တဲ့အခါ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်တယ် ဆိုတာလေးကို လည်းရှင်းပြပေးပါမယ်ရှင်
✅Stress Relief ဖြစ်သွားတာ
✅အိပ်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေတာ အစရှိသဖြင့် အာရုံကြောတွေ hormones တွေကို နှိုးဆော်စေပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကုသတဲ့ နည်းလမ်းကို aromatherapy လို့ခေါ်တွင်ကြတာပါ။ မြန်မာလို ဘာသာပြန်ရရင် မွှေးရနံ့ဖြင့် ကုစားခြင်းပေါ့။
နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်စေဖို့လုပ်ဆောင်သင့်သည့် အချက်များ..
လွယ်လွယ်ကူကူ နည်းလမ်းတွေနဲ့ Stress တွေဖြေလျှော့ကြမယ်...
🏡💭Indoor Air Quality ကောင်းအောင် ဘာတွေ လုပ်ရမလဲ?
Essential oil လေးတွေက ဘာကြောင့် physical and emotional benefits ကို ပေးနိုင်တာလည်း???